Nepalistudio » अाजकाे राशिफल (वि.सं. २०७४ मंसिर २२ गते शुक्रबार) अाजकाे राशिफल (वि.सं. २०७४ मंसिर २२ गते शुक्रबार) – Nepalistudio
अाजकाे राशिफल (वि.सं. २०७४ मंसिर २२ गते शुक्रबार)
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – बन्दव्यापार र व्यवसायबाट राम्रै लाभ हुन सके पनि घरायसी मामिला र प्रेमसम्बन्धका दृष्टिले कमजोर दिन छ । मानप्रतिष्ठा र उन्नति÷प्रगतिका लागि दौडधूप गरिने छ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले हाँके÷ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । परिवारजनका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग गुलाबी वा सिन्दूरे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार प्रकाशित